Mazano Akangwara Ekusarudza Yakakodzera Rollator
MaRollator akakosha kune avo vari kutambura neyakareba-nguva kuremara uye varasikirwa nesimba uye simba mumakumbo avo. Izvi vanofamba ikozvino huya nekuvandudza kwakawanda kunowedzera ruzivo kune mushandisi. Izvi vanofamba vane nzvimbo dzinogadziriswa. Mimwe mienzaniso ine mubati wedemo uye kabhini kekuchengetera kumberi kune zvidiki zvinhu. Hezvino zvimwe zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa usati waita yako yekupedzisira rollator kutenga:
Chinangwa Walker ndiyo inonyanya kukosha kutarisisa. Izvi vanofamba zvakagadzirirwa vanhu vane yakaganhurirwa kufamba nyaya kana kune vanhu vakura. Kana iri yemumwe munhu anongoda kubva kune imwe kamuri achienda kune imwe mukati meimba, zvakajairwa Walker inogona kunge iri sarudzo iri nani.
Vanotenderera vanouya nemhando mbiri dzemavhiri, mhando inokwenenzverwa uye mavhiri erabha enguva dzose. Ivo mhando yemavhiri iwe aunowana anoenderana nemaitiro aunoronga kushandisa iyo rollator. Kana iwe uchinge uchinge uchisangana nenzvimbo isina kuenzana, inflatable mavhiri anoshanda zvakanyanya. Vanotenderera vanouya nemavhiri matatu kana mana.
Chikamu chekuchengetedza uye kurerukirwa kwekushandisa
Iko kusununguka uye chengetedzo danho reiyo Walker zvinoenderana nemunhu kushandisa it. Iwo mavhiri ane zvigaro ane mabhureki kuti ave nechokwadi chekuti akachengeteka uye haatsvedza kana wakagara kana kusimuka kubva pawakagara nzvimbo.
vanofamba huya kuvanhu vehurefu hwakasiyana saka tenga imwe inoenderana nemushandisi. Muviri wako haufanire kumonyanisa uchiri kushandisa kwavari.
Vanhu vanoda nyaradzo vane sarudzo yezvigaro zvine zvigaro. Vamwe vanouya nekutsigira kumashure, izvo zvinobatsira kurerutsa kunetseka pazasi kumashure. Matatu mavhiri anotenderera haauye nezvigaro, saka chengeta izvi mupfungwa kana uchitarisa sarudzo. Iwe unofanirwa kuenda neane mavhiri mana kana iwe uchida chigaro sarudzo.
Kuwana izvo rollator pane zvaunoda zvinogona kunge zvichinyengera, asi ndinovimba matipi ari pamusoro achauya anobatsira panguva yekusarudza.